Izinselelo Eziphezulu Eziyi-5 Zesevisi Yamakhasimende (Futhi Ungazilungisa Kanjani) | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septhemba 22, 2017 Douglas Karr
Kusenezinkampani eziningi ezikholelwa ukuthi insizakalo yamakhasimende nokumaketha kuyimisebenzi ehlukile enhlanganweni. Ngeshwa, le minyango emibili ivame ukungqubuzana enhlanganweni. Ukusebenza kwamakhasimende manje sekunezinto zomphakathi ezingathinta - futhi zonakalise - idumela lenkampani, kuphazamise inqubekela phambili eyenziwa ngabakhangisi.
Ngaphandle koguquko lwedijithali olungena emkhakheni wezinsizakalo zamakhasimende, ukuhlinzeka ngesipiliyoni esihle samakhasimende kuhlala kubalulekile kumabhizinisi ezimbonini ezahlukahlukene. Nazi izinselelo ezisemqoka zesevisi yamakhasimende zanamuhla nokuthi ungawaxazulula kanjani ukuze unikeze isipiliyoni esimangalisayo samakhasimende.
Izinkampani zifana Dell, iklayenti, likwenza kahle kakhulu, linikeza wonke umsebenzi uqeqesho lokuthi ungayifaka kanjani imithombo yezokuxhumana emisebenzini yabo kanye nokunikeza izinsiza zamakhasimende eziqondile abangadlulisela kuzo izicelo zomphakathi. Le ndlela iqinisekisa ukuthi amakhasimende aphathwa ngempumelelo kungakhathalekile ukuthi akhuluma nobani nokuthi ingxoxo yenzeka kuphi.
I-Sparkle Training ithuthukise le infographic, i- Izinselelo ezi-5 eziphezulu zensizakalo yamakhasimende zango-2010 nokuthi Yini Okufanele Uyenze Ngazo.
Ukwenza ngokwezifiso kohambo lwamakhasimende - Amabhizinisi amaningi ahluleka ukwenza ukuxhumana kwamakhasimende ngendlela eqondene nawe, okuholela emazingeni aphezulu e-churn, emazingeni aphansi okwaneliseka kwamakhasimende, nokwehla kokwethembeka.
Ukuba Nombono Ogcwele Wekhasimende - uma abasebenzi bakho bekwazi ukufinyelela ngokushesha olwazini olubalulekile mayelana namathemba nokuthengisa, banethuba elingcono lokuvala isivumelwano noma okungenani bamsize lowo muntu bese beshiya into ekhumbulekayo.
Ukuqinisekisa Ukusebenza Kahle - Izindlela ezihlelekile neziphumelelayo zokuxhumana kwamakhasimende ngamunye zibucayi. Lokhu kudinga ukuthi uhlelo nenqubo ngayinye ihlehliswe futhi iqondiswe ngesikhathi sangempela.
Ukusebenzisa amaphuzu ahlukile wokuthinta amakhasimende - Amakhasimende manje anethuba lokuxhumana nemikhiqizo ngeziteshi ezahlukahlukene ezinjenge-imeyili, umbhalo, ucingo, ingxoxo, kanye nemidiya yokuxhumana nomphakathi. Qiniseka ukuthi uyabanikeza.
Ukwenza Ikhasimende Elidumazekile - Ukulindela kwamakhasimende kuphakeme kunanini ngaphambili futhi kubalulekile ukuthi abamele abahlinzeka ngamakhasimende akho babe namandla, isivinini, nokuzimela ukuqinisekisa ukuthi ikhasimende elidumele liphendulwa libe elenjabulo.
Yize lezi zinselelo ezinhlanu zizwakala zilula, kungathatha iminyaka ukuhlanganisa ukuthinta kwamakhasimende ngesikhathi sangempela ngezinhlelo zakho zokuphatha ubudlelwane bamakhasimende futhi unikeze amaqembu akho okuthengisa, ukumaketha, kanye namakhasimende ngolwazi abaludingayo.
Tags: ukuthukuthela kwamakhasimendeisevisi embi yamakhasimendeCRMInsizakalo yekhasimendeizinselelo zokuhlinzeka ngamakhasimendeukubukwa kwamakhasimendeukucwazimula ukuqeqeshwaamaphuzu okuthintaumbono wekhasimende
Ukumaketha kwePodcast: Kungani Izinkampani Zitshala Imali Ekukhipheni I-Podcasting